WARARKA BARAAWEPOST Arbaca 5 january2011
Siyaaradii Macallim Nuur oo lagu qabtay masjidka Alraxman ee Manchester
Waxaa maalintii axadda ahayd oo bishuna ahayd 2da January 2011, lagu qabtay dalka Ingiriiska ziyaarada Macalim Nur al Baraawi, taasoo lagu qabtay Masaajidka ARRAHMAAN ee magaalada Manchester ee dalka UK.
Waxaa munaasabaddaas kasoo qayb galay dad aad u fara badan oo ah kuwa deggan magaalada Manchester iyo kuwa kale oo ka kala yimid gobolada iyo magaalooyinka kale ee dalka Ingiriiska.
Furitaanki siyaarada waxaa lagu bilaabay aqriska quraanka kariimka waxaana intaas ka dib laga waramay taariikhda Macalim Nur iyo cilmiga laga dhaxlay ayadoo isla markaasi halkaasi laga akhriyay qaar ka mid ah qasiidooyinka iyo nabi amaanada uu allifay Macalim Nur. Ka dibna halkaasoo ayaa culumadii joogtay ducooyin ka akhriyeen ayagoo Ilaah ugu baryay inuu Macalim Nur hoy jannada ka siiyo cilmiisiga dadka ku anfaco.
Dagaalo iyo duqeymo wada socda oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Maanta barqadii ayaa waxaa magaalada Muqdishosidii u caadada ahaydba ka bilowday dagaalo culus iyo duqeymo wadajiro kuwaasoo u dhaxeeyey ciidamada DKMG Somalia oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo maleeshiyooyinka kuwa Xarakada Al Shabaab , dagaalkaasoo sidii horey looga bartay dagaalada Muqdisho ay waxyeelo ba�n ka soo gaartay dadka rayidka ah ee nasiibka u yeeshay inay magaaladaas ku sii haraan.
Dagaaladii saakay dhacay ayaa waxay ka dhaceen xaafadaha Hodan iyo Howl-Wadaag ee Gobolka Banaadir.dagaalka dhexmarayay ciidamada kala horjeeda ayaa waxaa barbar socday madaafiic iyo hoobiyayaal kuwaasoo qaarkood ay ku dhaceen xaafado ka baxsan aagagga ay dagaaladu ka dhacayeen.
Dagaaladaan ayaa sidoo kale saameeyn ku yeeshay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho kadib markii madaafiic habow ah ay ku dhaceen qaybo ka mid ah suuqaas.
Sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada DFKMG ayaa maanta howlgalo ay ku burburinayeen sandaqado ganacsi oo ku yaal waddada hareeraheeda ka fuliyay agagaarka isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho ka dib markii gelinkii dambe ee shalay uu hallaasi ka dhacay qarrax lala beegsaday ciidamada DFKMG qarraxaasoo qasaare u geystay dad rayid ah oo halkaas ka ag dhowaa.